FAQs – ICT.com.mm
အိုင်စီတီမှာ ရောင်းချသည့် ကုန်ပစ္စည်းများသည် အစစ်အမှန် ဖြစ်ပါသလား? Are products on ICT.com.mm are Genuine?
အိုင်စီတီသည် မြန်မာနိုင်ငံ အိုင်တီစျေးကွက်ရှိ အသိအမှတ်ပြု လက်လီ၊ လက်ကား အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်သာ အလုပ်လုပ်သောကြောင့် ပစ္စည်းမှန်၊ စျေးမှန် ဖြစ်ကြောင်းကို ၁၀၀% အာမခံပါသည်။
We work with industry leaders, credible retail stores and authorised distributors only. Thus, ICT.com.mm can guarantee that all products and services offered on this site are 100% genuine and brand new.
အိုင်စီတီမှာ ရောင်းချသည့် ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ပြင်ဆင်လဲလှယ်ခွင့်အာမခံလက်မှတ် ပါရှိပါသလား? Has any of ICT.com.mm’s products offer any warranty services?
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ အိုင်တီစျေးကွက်ရှိ အသိအမှတ်ပြု ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများနှင့်သာ အလုပ်လုပ်သောကြောင့် ကုန်ပစ္စည်း ၉၉%မှာ အာမခံချက်များ ပါဝင်ပြီး ဖြစ်သည်။
As stated above, ICT.com.mm work with authorised distributor and resellers in Myanmar. Thus, 99% of the products sold here include warranties.
ပို့ဆောင်ခကို မည်သို့ တွက်ချက်ပါသလဲ? How do you calculate delivery charges?
ပို့ဆောင်ခသည် ဝယ်ယူသူ အော်ဒါလုပ်သည့် ပစ္စည်းနှင့် ပို့ဆောင်ပေးရမည့် လိပ်စာပေါ် မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲ ရှိပါသည်။ “အိုင်စီတီ ဒေါ့ကွန် ဒေါ့အမ်အမ်“မှ ဝယ်ယူသူများ checkout လုပ်သည့်အခါတွင်လည်း မည်သို့မည်ပုံ ပို့ဆောင်ပေးရမည်ဆိုသည့် ရွေးချယ်မှုများကို လွယ်ကူစွာ တွေ့ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်သည်။
Delivery charges may differ on the items you shop and your location upon checkout. ICT.com.mm includesavariety of additional shipping options for your convenience on checkout.
ဘယ်နေရာတွေကို ပို့ပေးပါသလဲ? Where do you deliver?
အိုင်စီတီသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသာ ပို့ဆောင်မှု လုပ်ပေးပါသည်။ သို့သော် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ဝယ်ယူအားပေးသူများ၏ မေးမြန်းမှုများကြောင့် ယခုအခါ အိုင်စီတီမှ ကုန်ပစ္စည်းအချို့ကို နိုင်ငံခြားသို့လည်း ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ချတ် ဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ICT.com.mm deliver only in Myanmar at this moment. However, due to increasing inquiries from overseas customers, we are now offering selected products for overseas delivery. Contact via email or chat for further queries.
ပစ္စည်းပို့တာ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ? How long will delivery take?
အကြမ်းမျဉ်း ကြာမြင့်နိုင်မည့် အချိန်များမှာ – Estimated delivery times are as follows:
အိုင်စီတီသည် ဝယ်ယူသူကို ချက်ချင်းဆိုသလို မှာယူထားသည့် ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုစေလိုသော ဆန္ဒအပြည့်အဝ ရှိသဖြင့် မြန်မာပြည်အတွင်း လက်ရှိ ရှိနေသော သယ်ယူပို့ဆောင်မှု အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးနိုင်သည့် လုပ်ငန်းများဖြင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည့်အပြင် ကိုယ်ပိုင် စူပါမြန်သည့် ပို့ဆောင်မှုအဖွဲ့ လည်း ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အိမ်တံခါးဝကို လုံခြုံစိတ်ချမြန်ဆန်စွာ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
We have our own super speed delivery team and also partner with the best logistics services available in Myanmar to deliver the products as fast and secure as possible to your doorsteps.
အော်ဒါတင်ပြီးသွားလျင် ဘာဆက်လုပ်ဖို့ လိုပါသလဲ? What exactly happens after ordering?
ဝယ်ယူသူသို့ အိုင်စီတီမှ တာဝန်ရှိသူက ကုန်ပစ္စည်းများ လုံခြုံချောမွေ့စွာဖြင့် တိကျမှန်ကန်အောင် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန်အတွက် တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် SMS ဖြင့် မည်သို့ ဆက်လက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါမည်။ သင့်ဆီလည်း ဝယ်ယူထားသည့် ဘောက်ချာတစ်စောင် အီးမေးလ် ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မည်။
You will receiveacopy of an invoice andacall or SMS from ICT.com.mm for further instruction.
ဘယ်လိုနည်းဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ပါသလဲ? What methods of payment do you offer?
အိုင်စီတီတွင် လက်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိမှ ငွေချေစနစ်၊ ဘဏ်သို့ တိုက်ရိုက် ကြိုတင်ငွေလွှဲ စနစ်၊ ခရတ်ဒစ်ကဒ် (ဗီဇာ၊ မာစတာကဒ်)၊ အမ်ပီယူကဒ်၊ ဝေ့ဖ်ပေး၊ ကေဘီဇတ်ပေး၊ ဝမ်းပေး၊ ဧရာပေး၊ အမ်-ပိုက်ဆံ နှင့် ကုန်ပစ္စည်း လာရောက်ရွေးချယ်မှ ငွေရှင်းစနစ်များဖြင့် ပေးချေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
We offer Cash on Delivery, Bank Deposit, Credit Cards (Visa, MasterCard only), MPU Card, WavePay, KBZPay, OnePay, AYAPay, M-Pitesan and Cash on Pickup options at our showroom.
အပိုဆောင်းငွေ မယူဆိုတာ ဘာလဲ? How does no surcharge works?
ICT.com.mm အော်ဒါစုစုပေါင်းကျသင့်ငွေကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ အောက်ဆိုလျှင် Surchargeကို ခုနှိမ်ပေးမည်။ အော်ဒါစုစုပေါင်းကျသင့်ငွေကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ အတိ သို့မဟုတ်လျှင် ကျော်လွန်ပါက စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ၏ ၄%ကို Visa, Master Cardများဖြင့် ပေးချေမှုများအတွက် ထပ်ပေါင်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၂%ကို MPU Cardဖြင့် ပေးချေမှုများအတွက် ထပ်ပေါင်းမည် ဖြစ်သည်။
ICT.com.mm waive surcharge on any order until the total order amount reached to K1,000,000. If an order amount is equal to or more than K1,000,000, 4% surcharge is payable for Visa, MasterCard and 2% for MPU card.
ဝယ်ယူပြီးမှ အော်ဒါကို ပယ်ဖျက်လို့ ရပါသလား? Can I cancel my order after purchasing?
ဝယ်ယူပြီး ကုန်ပစ္စည်းကို ပြန်ပေးလို့ ရပါသလား? Can I return my purchased items?
အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်မှအပ ဝယ်ယူခဲ့သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အောက်ပါ အကျိုးအကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ပါက ၃ ရက်အတွင်း ပြန်လည် ပေးပို့ လဲလှယ်နိုင်မည်။ သို့မဟုတ်ပါက မည်သည့်အကျိုးအကြောင်းကြောင့်မှ ဝယ်ယူပြီး ပစ္စည်းများကို ပြန်လည် လဲလှယ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ဝယ်ယူသူဘက်မှလည်း ဝယ်ယူပြီးပြီးချင်း ကနဦး ၂ နာရီအတွင်း ‘My Account’ ထဲသို့ ဝင်ရောက်ကာ အော်ဒါကို ပယ်ဖျက်ခွင့် ရှိသည်။
Items with the following conditions are qualified to return within three (3) working days. Else, non-returnable for any reasons.
ဘောက်ချာထဲမှာ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မဟုတ်ခဲ့ပါက။ (ဥပမာ – ကာလာ မှားနေခြင်း၊ model မှန်ကန်မှု မရှိခြင်း။)
ကုန်ပစ္စည်း၏ အထုပ်အပိုး ပျက်စီးပြီး၊ ဖွင့်လှစ် အသုံးပြုထားခြင်း။
အိုင်စီတီမှ နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါသလား? Can ICT provide technical services to customers?
အိုင်စီတီမှာ SSD လဲချင်သလား သို့မဟုတ် အခြား ပီစီ သို့မဟုတ် မတ် ကွန်ပျူတာများအတွက် နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လိုအပ်ပါက တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် ဝက်ဆိုဒ်ရှိ ဆက်သွယ်ရန် စာမျက်နှာမှ လွယ်ကူစွာ ရက်ချိန်းယူနိုင်ံသည်။
If the customer wants to replace SSD inside the laptops or any technical services for both PC and Mac, you can book an appointment with our technicians via telephone or contact page.
ဝယ်ယူနေတုန်း အကူအညီလိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? What do I do if I need assistance in buying online?
အောက်ပါလင့်များတွင် အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။Please use the following communication channels.
Telephone 09 765 441 707/08/09/10